ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ (၂၀. ၁၁. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(ခ)-အခွန်စိမ်းပြသ အခွန်ဆောင်ပြီးမှ အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုခြင်းကို ကညနမှ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်ပေးပြီး မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင် စာအုပ်နောက်ကျောပါ သတိပြုရန်အချက်များ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်မည့် စီမံချက်မျိုး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်
(င)-မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန် ယာဉ်စစ်ဆေးရေးဌာနများကို ပုဂ္ဂလိကပြုလုပ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီသော ကားပြင်ဝန်ဆောင်မှုများကို စည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်စေသည့်စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ တောဖျားချောင်းဒေသ၊ ဆင်သီပိန္နဲတောကျေးရွာဆိပ်ကမ်း၌ ပြိုကျပျက်စီး သွားသော ကမ်းထိန်းနံရံ ၁၅၀ ပေနှင့် ကမ်းပြိုမြေ ၁၃၀၀ ပေခန့်တို့ကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဆ)-ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကို အခြေပြု၍ပြေးဆွဲနေသော မြို့ပတ်ရထားပြေးဆွဲမှုနှင့် လမ်းများ၊ ဘူတာရုံများကို မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပေါင်းစပ်၍ မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်နေသည်ဆိုသည့် စီမံကိန်းများကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်